Ny tenimiafinao iCloud dia mety voakorontana (indray) | Vaovao IPhone
La ny fiainana manokana Io no ahiahin'ireo orinasa lehibe ankehitriny sy ireo serivisy rehetra manolotra fampiantranoana angona manokana. Tokony ho ahiahinay ihany koa izany, satria imbetsaka tsy fantatsika ny loza atahorantsika ny data, fa tantara hafa izany.
Ny fahafantarana ny olan'ny tsiambaratelo dia mitombo eo amintsika rehetra, amin'ny ampahany satria isaky ny mitahiry data bebe kokoa izahay ny antsika ao amin'ny rahona. Noho izany, mandeha ny fanairana isaky ny milaza ny olona fa nahita fomba vaovao hialana amin'ireo sakana amin'ny serivisy ka hidirana amin'ny fiainantsika manokana.
Ny tanjon'ity fanafihana ity indray dia iCloud, zavatra toa lasa fironana tato ho ato. tamin'ny alalan'ny GitHub Fitaovana vaovao no hita izay hampiasa herisetra hihoarana ny famerana ny rafitra Apple, famakiana ny teny miafina ary hiditra amin'ny fampahalalana.
Ity fomba ity dia mifototra fotsiny amin'ny teny rakibolana napetraka ao amin'ilay fitaovana, izay hozahana manaraka hatrany mandra-pahita ilay marina. Mazava ho azy fa tena zara raha io rafitra io, satria raha tsy ao anaty rakibolana ny teny miafinao dia tsy hita izany. Na izany aza, olona maro no mametraka ho fomba fiarovana ho teny iray izay fantatr'izy ireo fa tsy alphanumeric, izay mahatonga azy io ho lasibatr'ity rafitra ity.
Toa tsy zavatra tokony hampanahy antsika, satria hanamboatra azy io tsy ho ela (amin'ny teôria) i Apple, fa mametra-panontaniana momba ny filaminan'ny iray amin'ireo sehatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao izy. Azontsika antoka fa samy mahatadidy ny fandrobana faobe ny nudes amin'ireo olo-malaza nitranga tamin'ity fahavaratra ity, zavatra iray izay nahatonga ny rafitra fiarovana ny orinasa hametraka fanontaniana betsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Fitaovana vaovao hanenjehana tenimiafina iCloud hita